Udliwanondlebe noPere Cervantes, umbhali we El chico de las bobinas | Uncwadi lwangoku
Iifoto: I-Twitter yePere Cervantes.
UPere Cervantes inoveli entsha, Inkwenkwe eneekhoyili, emva Blows y Imizuzu emithathu yombala, abaphumeleleyo a mabhaso de Inoveli yeCagagena Negra kunye ne Iileta zeMeditera Olona lwaphulo-mthetho lubalaseleyo. Ngaphambi kokuba nabo Amanzi okuphuka y Abasivumeli ukuba sibe ngabantwana. Umbhali waseBarcelona undinike olu dliwanondlebe apho athetha ngayo yonke into kancinci: amava obomi, iincwadi kunye nababhali ikhetha, amasiko xa ufunda okanye ubhala okanye eyakho uluvo ngaye I-panorama yokuhlela yangoku. U-Lkwaye ndiyalixabisa kakhulu ixesha lakho nobubele bakho ngokundikhonza.
Udliwanondlebe noPere Cervantes
Iindaba Zoncwadi: Ngaba uyayikhumbula incwadi yokuqala oyifundileyo? Kwaye ibali lokuqala olibhalileyo?
Pere Cervantes: Ndiyathandabuza phakathi Ivanhoe y Isiqithi sobuncwane. la Ibali lokuqala que Ndabhala njengokuba yayinjalo ngo-2004, inoveli eyekiweyo ngoku enesihloko Imvulo engamakhulu amathathu anamashumi amathandathu anesithandathu. Kuyo wadibana nenxalenye ye Amava am njengomjongi woxolo kwiiBalkan. Ngenye imini ndiza kubuya ngendlela yokubhala kuloo mbambano endiyifumene ngokusondeleyo.
I-PC: Ewe, buyela kwinoveli eyaziwayo nguRobert Louis Stevenson, Isiqithi sobuncwane. Ndicinga ukuba ndisemncinci kakhulu ukuba le ncwadi indikhokelele kwezo imihlaba kude lee yeyam kwaye leyo, nangona kunjalo, bendinokuba nomfanekiso ngqondweni wabo, ndide ndibachukumise ngazo zonke izinto endinikwe zona yingxelo leyo. Ii-Adventures, imfihlakalo kunye nesingqisho ukuba, nangona ixesha lihambile, khange ndikwazi ukulibala. UStevenson wayibhala ngenjongo yokonwabisa unyana wakhe kwaye into awayenzayo yayiyiyo ukonwabisa uluntu. Yintoni enye onokuyifuna!
I-PC: Andinakuba nayo. UFrancisco UGonzalez Ledesma, UVazquez Montalban, UJuan UMarsé, uArturo UPererez-Reverte, UCarlos URuiz Zafon, Mnu Uyaphumelela, UPawulos Oyster, Emmanuel UCarrere, UVargas Llosa, URose Montero, uTana French, UHarlan ICoben, uJoyce Carol Oates, Lewis Umhlaba… Yintoni endiyaziyo. Baninzi ababhali abandonwabisa ngamabali abo.
PC: Inkqubo ye Pijoaparte kaMarsé. Nangona ndicinga ukuba sele ndidibene nabanye babo.
PC: Yiba nje cwaka okanye ubekelwe bucala nee-headphone kunye Umculo weklasikhi okanye jazz imvelaphi.
I-PC: Ndifunda nanini na ndinako kwaye naphina. Kodwa kuyacaca ukuba Ikhaya lam Yeyona ndawo intle kuyo. Zombini kwifayile ye- egumbini lokuhlala, njengakum iofisi kwaye ehlotyeni kwi jardín.
PC: Zonke ezi bendizikhankanyile ngaphambili kunye neshumi elinambini elininzi engakhange ndilikhankanye. Ndiyakholelwa ngokunyanisekileyo oko okokuqala umbhali ngumfundi, isiponji sobomi kunye noncwadi. Uninzi lwethu lufumana iimpembelelo ezininzi, ngokuzazi okanye ngokungazi. "Ndilulwandle lweempembelelo ezinemilambo yokubhala engenamagama", heh, heh, heh, heh, heh.
AL: Zeziphi iintlobo ozithandayo?
PC: Uhlobo olumnyama uhlala enditsalela ngaphezulu kwabanye, kodwa ndiyazondla zonke iintlobo zokubalisa. Iilebhile azoyiki okanye zinditsale. Ndijonga ezinye izinto xa ukhetha ufundo. Ingathi kum ngqiqweni umgaqo wokujonga umbhali ongaphezulu okanye ongaphantsi mgangatho isekwe kwisini oqhele ukubhala.
PC: Okwangoku ndifunda Igolide emnyama, de UDominique Manotti, UVavanyo oluNinzi. Ndiyayonwabela. Y Ndizibhala ngokwam kwinoveli yam elandelayo zazo okwangoku ndikhetha ukuzigcina el umxholo kunye nomxholo en imfihlo.
I-PC: Ndingumbhali nje ofunda kakhulu kwaye ubhala akwaziyo. Andizukuphawula kumzi-mveliso wopapasho Ndiyazi kuphela indawo endichukumisayo. Kuyacaca ukuba inani de iimpapasho yi-astronomical ngokomkhwa wokufunda abathi sinayo eSpain. Ndiyazi nje ukuba ezi nyanga zidlulileyo ndizibonile Iithiyatha ezixineneyo abaya kwi Ukukhutshwa kweNcwadi kwaye enye Iindaba ezimnandi apho ndihlala khona ndibhiyozela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Udliwanondlebe noPere Cervantes, umbhali we-El chico de las bobinas
Iincwadi zikaJuan Gómez-Jurado
Iincwadi zika-Elvira Lindo